(OLF News, December 27, 2008) OLF News sources reported that the current TPLF-Ethiopian government is sending a large number of intelligence personnel [spies] to several towns and rural areas in the Eastern Harargee zone of Eastern Oromia for the purpose of getting information about the Oromo Liberation Army. Full Report
Oromo Community Cultural Festival Celebrated in Melbourne, Australia
VIDEO: Oromia Community Festival
(OLF News, December 22, 2008) Our correspondent from Finfinnee (Addis Ababa) reported that amongst the 200 so Oromo nationalists arrested in the notorious Maikelawi Mirmera Prison by the [Ethiopian] Wayyaanee regime over the last six weeks. Full Report
Only 16 of Over 200 Oromo Prisoners Charged with "Crime" and Sent to Qalittii Prison
(OLF News, December 20, 2008) Our correspondent from Finfinnee (Addis Ababa) reported that amongst the 200 so Oromo nationalists arrested in the notorious Maikelawi Mirmera Prison by the [Ethiopian] Wayyaanee regime over the last six weeks. Full Report
Oromo Nationalists Organized Under 13 OLF Cells Discussed About Oromo Liberation Struggle Led by OLF: Made Financial Contribution to OLF
(OLF News, December 19, 2008) Oromo nationalists organized under 13 OLF cells, namely: Agartuu Ijaa, Finciltuu Diinaa, Haya Carcar, Daakaa Oromoo, Dhaddacha Dirree, Hundee Bilisummaa , Haroo Adii, Birruu Beenyaa, Guutamaa Hawaas came together to celebrate the EID Arafaa and discussed about the Oromo liberation struggle led by OLF. Full Report
HRLHA Press Release: Another Batch of Oromos Face AnotherBundle of Charges
(December 19, 2008) Among the numerous civilian Oromos who have been detained during the most recent wave of arrest and imprisonment, sixteen of them have been charged with an allegedly politically motivated crime. Full Report
(OLF News, December 15, 2008) The Wayyaanee [Ethiopian] invading army, which considers the Oromo people its number one enemy that can threaten its power, is reported to have killed two Oromo nationals in Western Harargee zone around a place known as Saaqqataa. Full Report
Heroic Oromo Liberation Army (OLA) Freedom Fighters Made Over 28 Wayyaanee Invading Troops Out of Action
(OLF News, December 14, 2008) The hope and shield of the Oromo people, the Oromo Liberation Army (OLA) Eastern Command reported that our gallant freedom fighters have put over 28 Wayyaanee [Ethiopian] invading troops out of action on December 07, 2008 in Eastern Oromia, killing 13 enemy troops and wounding at least 15. Full Report
Oromo Local Heroine in London, U.K.
(December 13, 2008) The British government honored Aduu Joba, a graduate of Kingston University in London recently for her efforts to teach Oromo children and youth in London how to read, write and speak Afan Oromo. Full Report
(OLF News, December 12, 2008) Our sources from Finfinnee (Addis Ababa) reported that Oromo nationalists from several towns of Eastern part of Oromia such as Ciroo, Adama, Bushooftuu, all the way up to Finfinnee are being abducted and severely beaten for wearing t-shirt or sweater that has the picture of the president-elect of the United States Barack Obama. Full Report
(Arfaasaa 31, 2008)Hunda dura baga waggaa haarawa 2009 waliin geenye jechuun maqaa hogganootaa fi miseensota ABO, maqaa WBO kan diinaa wajjin falmaa hadhaawaa irra jiruu fi maqaa dargaggoota Oromoo falmaa irra jiraniin gammachuu fi hawwii qabu isinii dabarsa. Gabaasa Guutu
Amajjii 1, Guyyaa WBO ti
(Arfaasaa 31, 2009) Ummatni Oromoo guyyaa gabrummaa jalatti kufe irraa kaasee bilisummaa fi walabummaa isaa deebifachuu wareegama hedduu baase. WBOs wareegni inni baasee fi injifannoon inni galmeesse salphaa miti. Gabaasa Guutu
Qabsaa'aan Ni Kufaa Qabsoon itti Fuffaa
(Arfaasaa 24, 2008) Hin'duunee ni jirta goota Oromootaa; Xurii takka hin'qabduu seenaan si yaadataa; Kaayoo tee hin'gannee; Irbuu tee hin'diynee; Beelaa dheebuu jattee diinaaf hin'bitamnee; Saba kee gurgurtee qarshii gula hin'demnee; Habashaa sodattee takkaa gad hin'jannee; Jaala koo ni jirta bar ati hin'duunee; Guyyaa Aduun baate deebitee ol kaataa; Sabni kee ililchee si galcha galataa. Gabaasa Guutu
Mootummaan Wayyaanee basaastoota hedduu baha Harargeetti bobbaasuu isaa maddeen gabaasan
(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 23, 2008) Maddi Oduu ABO akka gabaasetti mootummaan Wayyaanee QBO fi sochii WBOtti rifachuu irraa, basaasa isaa hedduu magaalotaa fi badiyalee Harargeetti bobbaasuun ummata goolaa jira. Gabaasa Guutu
(Arfaasaa 22, 2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Shawaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Gabaasa Guutu
(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 21, 2008) Ayyaaneffatni Agarsiisa Aadaa Hawaasa Oromoo (Oromo Community Cultural festival) guyyaa kaleessaa mudde 21, magaalaa Melbourne keesatti do’atamaa ooluu odu-gabaasaan MOA Austraalia irraa beeksise. Agarsiisa Aadaa Oromoo waldaa hawaasa Oromoo Austraaliyaan qopheessame kana irratti do’attootni dhibboota hedduun lakkaayaman irratti argamanii jiru. Gabaasa Guutu
Ibsa Ejjennoo Konyaa ABO Beljiyeem
(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 21, 2008) Konyaan ABO Beljiyeem walgahii addaa qaama olaanaa ABO Kutaa Awuroppaa waliin gaafa 20/12/2008 miseensota isaa guutuu bakka argamanitti adeemsifachuun milkiin xumurateera. Gabaasa Guutu
Magaalaa Finfinnee qofa keessa daa'imman karaa irra bulan 100,000 ol akka jiran qorannoon geggeeffaman mul'isan.
(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 17, 2008) Wayta mootummaan wayyaanee Itophiyaan jijjiiramte; dinagdeen biyyaa haala mul'atee hin beekneen guddatee jireenyi ummatootaa wayyaa'e jechuun ololaa jiru kanatti, magaalaa Finfinnee qofa keessatti daa'imman kan nyaatanii fi bakka bulan dhaban 100,000 ol ta'an karaa irra akka bulan qormaatni geggeeffame ifa godhee jira. Gabaasa Guutu
Walga'ii Wayyaaneen Godina Wallagga bahaa Ona Sibuu Sirreetti gaggeessuuf yaalte mormiin fashale.
(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 16, 2008) Godina Wallagga bahaa Ona Sibuu Sirreetti Medde 9,2008 Wayyaanee fi lukkeen ishee OPDOn barsiisotaa fi barattoota sossobanii ofitti hawatuuf maqaa walgahiin yaalii isaan godhan diddaa isaan mudateen milkii malee hafuu maddeen keenya gabaasan. Gabaasa Guutu
(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 16, 2008) Odeessi Baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabe akka mirkaneessutti, waraanni wayyaanee dalagaa badiif bobbaafaman, Godina Harargee Bahaa naannoo Bobbaasaa je'amtutti, dubartoota fi shamarran hojii daldalaa irratti bobba'an, seeran ala kotorobaandii Somaali-Laandi irraa galchitan maqaa je'uun dharaan erga qabaniin booda humnaan gudeeduun dhibee HIViif saaxilaa jiru. Gabaasa Guutu
(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 15, 2008) Abdii fi gaachana ummata Oromoo kan tahe WBOn Godina Baha keessa sossoohu, Muddee 07/2008 waraana wayyaanee maqaa sakattaan ummata keessa luffisuun shoorarkeessaa turee irratti tarkaanfii fudhateen 13 irraa ajjeesee kanneen biroo 15 ol madeessuu ajaji WBO Godina Bahaa beeksise. Gabaasa Guutu